Berlin ao anatin'ny telo andro | Vaovao momba ny dia
Berlin ao anatin'ny telo andro
Mariela Carril | | Berlin, Inona no ho hita
Telo andro dia salanisa tsara hahalalana tanàna iray, farafaharatsiny amin'ny voalohany. Rehefa mikasa ny hitsidika tanàna maro na firenena maromaro isika, any Eropa izay akaiky rehetra, ny telo andro matetika no fotoana natokanay ho an'ireo renivohitra.
Mazava ho azy fa maro no hahita azy kely ary ny hafa ara-dalàna sy ilaina. Raha ny marina dia tsy ela loatra ny telo andro, fa mamela antsika hijery tsara ireo toerana manintona indrindra na mpizahatany mba hahitana raha mendrika ny hiverenana any aoriana kokoa. Ka andao jerena izay azontsika atao Mahalalà an'i Berlin ao anatin'ny telo andro.
2 Inona no ho hita any Berlin
Tokony ho fantatrao izany Berlin tanàna faharoa be mponina indrindra eto Eropa izy io ao ambadik'i Londres, onenan'olona mihoatra ny telo tapitrisa sy sasany. Any avaratra atsinanan'ny firenena no misy azy, amoron'ny renirano Havel sy Spree.
Manana tantara efa an-jato maro izy io ary fantany ho ivon'ny fanjakana, fanjakana, repoblika ary mazava ho azy, ao amin'ny Reich Fahatelo malaza ratsy laza. Ankoatr'izay, nandritra ny am-polony taona lasa dia tanàna nizara roa teo amin'ny rafitra ideolojika, politika ary toekarena: ny kaominista sy ny kapitalisma. Ary toy ny hoe tsy ampy izany taorian'ny fianjeran'ny rindrina, nanjary fon'ny firenena indray tamin'ny fotoana nampiraisana azy indray, manamarika ny fahaterahan'ny Alemanina ho herin'ny indostrialy ankehitriny.
Berlin manana ririnina mangatsiaka, indraindray manana diplaoma ambanin'ny zero, ary ny hatsiaka dia maharitra hatramin'ny lohataona miaraka amin'ny filatsaky ny lanezy eo anelanelan'ny Desambra sy Martsa. Ny fahavaratra kosa dia tsy mafana ary ny hafanana antonony dia tsy mahatratra 30 ºC.
Inona no ho hita any Berlin
Nilaza izahay fa manana telo andro hitetezana ny tanàna, Ora 72. Avy eo dia mora ny mahafantatra mialoha izay tiantsika. Tianay ve ny tranombakoka, ny galeran'ny zavakanto, ny toerana misy ny tantara, ny lamaody, ny gastrolojia ...? Ary raha tsy manapa-kevitra isika, dia afaka manao potpourri ny toerana itodiana sy ny fahalianana manafatra izay rehetra akaiky na tsy dia akaiky.
Ohatra, ny andro voalohany Azontsika atao ny mitsidika ny vavahady Branderburg, ny Fahatsiarovana ireo Jiosy nisy namono tany Eropa, ny bunker an'i Fuhrer, ny kianjan'i Potsdamer, ny fampirantiana ny Topografie an'ny Terror ary ny Checkpoint Charlie malaza, toby miaramila.
Vavahady Branderburg: naorina teo anelanelan'ny 1788 sy 1791 ary izy no trano voalohany tao amin'ny fifohazana Greek amin'ny tanàna. Ny mpanao mari-trano antsoina hoe Carl Gotthard Langhans no nanangana azy io ary niasa tao amin'ny fitsarana Prussian ary nahazo aingam-panahy tamin'ny fidirana an-tsokosoko mankamin'ny Acropolis any Atena. eFA 26 metatra ny haavony ary 65 metatra ny halavany misy sakana roa misy tsanganana Dorika enina lehibe sy matanjaka. Tamin'ny 1793 dia napetrany ny kalesy, ilay iray ihany rehefa niditra ny tanàna i Napoleon dia nentiny tany Paris ho babo ady ary niverina ihany izy tamin'ny 1814. Tamin'ny fizarazaran'i Alemana taorian'ny Ady Lehibe Faharoa, ny vavahady Brandenburg nijanona teo amin'ny lafiny soviet ary taorian'ny fananganana ny rindrina tamin'ny 1961 dia nijanona tao anatin'ny faritra fanilihana izy io ka am-polony taona maro no tsy nisy afaka nitsidika azy io. Tamin'ny 1989 ihany vao navoaka ampahibemaso.
Fahatsiarovana ireo Jiosy maty tany Eropa- Manome voninahitra ireo jiosy novonoina enina tapitrisa ary maimaim-poana ny fidirana. Misy fampisehoana mahafinaritra ao amin'ny foibem-baovao. Any Cora-Berliner-strasse, 1 no misy azy.
Hitler bunker: ny bunker dia teo anelanelan'ny Square Potsdamer sy ny vavahady Branderburg ary androany eo amin'ilay tranokala dia misy trano iray nanomboka tamin'ny taona 80 tamin'ny andron'ny Sovietika. Amin'ny antoandro misy ny fitsangantsanganana fizahan-tany io dia miala eo amin'ny parking izay misy ny varavarana fidirana mankamin'ny bunker na dia tsy azo atao aza ny miditra. Raha tianao ny bunkers dia any an-tanàna dia misy hafa izay azonao vangiana.
Kianja Potsdamer: Izy io dia iray amin'ny Kianja ampahibemaso lehibe indrindra any Berlin ary iray kilometatra miala ny vavahady Branderburg. Nomena ny anaran'ny tanànan'i Potsdam izy io ary taloha, tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-XNUMX, iray amin'ireo toerana be olona indrindra tao an-drenivohitra Alemanina.
Topografikan'ny fampihorohoroana: tsidihina tokoa ity fampirantiana ity. Zava-dehibe izany foibe antontan-taratasy mazava izany izay rehetra natao teo ambanin'ny governemanta nazi. Eto tamin'izany fotoana izany ny foiben'ny polisim-panjakana miafina, ny SS, sy ny Security Office. Ny fampirantiana maharitra dia mifandraika amin'izany indrindra, na dia misy fampiratiana tsy maharitra hafa aza. Any Niederkirchnerstrasse no misy azy, 8. Manomboka amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 8 alina no misy azy maimaim-poana ny fidirana.
Checkpoint Charlie: io ny tafika miaramila izay nampisaraka an'i Berlin Atsinanana tamin'ny Berlin Andrefana nandritra ny Ady mangatsiaka. Taorian'ny fampiraisana indray dia nanjary nahasarika mpizahatany ilay trano kely ary androany dia ao amin'ny Allied Museum ao amin'ny manodidina an'i Dahlem izy, satria nafindra izy io ary amin'ny tranonkala voalohany dia marika iray ihany no ho hitanao.
El andro faharoa afaka mitsidika ny Museum of the Island, ny Berlin TV Tower, Alexanderplatz, ny Fahatsiarovana ny ady sovietika, ny tetezana Oberbaumbrucke ary ny East Gallery izahay.
Museum Museum: no anarana nomena ny tapany avaratry ny nosy ao amin'ny ony Spree. Ireto misy maro tranombakoka sokajy iraisam-pirenena ary nanomboka ny taona 1999 dia nojerena io sehatra io Lova manerantany.
Berlin TV Tower: Manana izany 368 metatra ny haavony ary daty nanomboka tamin'ny 1969. tranonkala iray notsidihina tokoa izy ity ka mety betsaka ny olona miandry hiakatra. Tsara ny fomba fijery ary misy cafe any ambony, izay mihodina manodidina ny antsasak'adiny. Akaiky ny Alexanderplatz izy io.
Fahatsiarovana ny ady sovietika- Ao amin'ny Treptower Park, eo afovoany izy io, ary naorina taorian'ny Ady Lehibe Faharoa sy ny tranon'ny fasan'ny miaramila sovietika 500.
Tetezana Oberbaumbrucke: Momba ny a tetezana misy dobo-doble eo ambonin'ny ony Spree ary tandindon'i Berlin izy io. Tamin'ny vanim-potoana sovietika dia ny sisin-tany teo anelanelan'ny roa tonta ary taorian'ny fanamafisana dia naverina tamin'ny laoniny ary nisy faritra vaovao namboarina noforonin'ny mpanao maritrano espaniola malaza Santiago Calatrava.
East Gallery: inona ny sisa amin'ny Wall Berlin, ny faritra lava indrindra ary ny galeriana misokatra malalaka eran'izao tontolo izao misy sary an-drindrina mihoatra ny 100 mandritra ny iray kilaometatra sy sasany izay mitovy amin'ny River Spree.
Ary farany ny andro fahatelo tany Berlin Ny anjaran'ny Victory Column sy Tiegarten Park, ny fiangonana Fahatsiarovana an'i Kaisen Wilhelm ary ny tranobe Reichstag.
Reichstag: parlemanta alemà io ary azo tsidihina miaraka amin'ny fisoratana anarana mialoha. Misy fampirantiana ara-tantara sy dôma fitaratra maoderina eo amin'ny terras miaraka amin'ny zaridaina sy trano fisakafoanana. ny Tours Maharitra antsasak'adiny izy ireo ary amin'ny anglisy, italianina ary frantsay. Misokatra ny talata ka hatramin'ny alahady ny fampirantiana manomboka amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 6 hariva.
Colombia fandresena sy zaridaina Tiergarten: ity park ity dia malaza be any Berlin ary 210 hektara sy ny tantara nandritra ny taonjato maro. Amin'ny lafiny iray, ny Colombia fandresena dia tamin'ny taonjato faha-XNUMX ary fahatsiarovana ny fandresen'ny Prussianina tamin'ny Ady Prussianina-Danoa. Manana a deck fandinihanaVita amin'ny granite mena voadio izy io ary misy efitrano misy andry ary rindrina vita amin'ny mozika vita amin'ny mozika sy varahina. Tamin'ny voalohany dia teo alohan'ny Reichstag izy io fa taty aoriana dia nafindra tany Tiergarten ary angamba nanavotra azy tamin'ny baomba.
Amin'ireo tranonkala manan-danja ireo dia afaka manampy fitsidihana ny Katedraly St. Hedwig ianao, ny Berliner Dom ary ny tsena Hackescher miloko. Mazava ho azy fa afaka misoratra anarana amin'ny fitsangatsanganan'ny mpizahatany na fitsidihana bisikileta mahafinaritra ianao. Misy aza ny gastronomika, raha tianao ny manandrana tsiro vaovao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » Berlin » Berlin ao anatin'ny telo andro
Inona no hitantsika any Roma ao anatin'ny 3 andro
Nosy telo mifono mistery no niely nanerana an'i Eropa